Mooshinka Xil Ka Qaadista Trump Oo Caddeyn Xad-dhaaf Ah Loo Helay – somalilandtoday.com
Mooshinka Xil Ka Qaadista Trump Oo Caddeyn Xad-dhaaf Ah Loo Helay
(SLT-Washington)-Caddeynta loo helay xil ka qaadista Donald Trump ee ah in uu awoodda xafiiska si xun u adeegsaday, waa mid xad-dhaaf ah, sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen guddiga baadhitanka ku sameynaya madaxweynaha Mareykanka.
Madaxweynaha wuxuu adeegsaday siyaasad ku saleysan dano shakhsiyadeed “oo aan ahayn danaha qaranka Mareykanka”, ayaa lagu xusay warbixin muhiim ah oo loo diray Aqalka Wakiillada Mareykanka.
Wuxuu sidaas sameeyay isagoo “faragelin dibadeed ka dalbaday” Ukraine, si ay uga caawiso in dib loo doorto 2020-ka, ayaa ku xusan qoraalka.
Wuxuu Trump beeniyay in uu qalad sameeyay, wuxuuna baadhitaanka ku tilmaamay ugaadhsi xun oo isaga ka dhan ah.
Ka hor inta aanan la shaacin warbixinta qabyada ah, Madaxweynaha oo ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga wuxuu weeraray Dimuquraadiyiinta hor-kacaya baadhitaanka oo uu ku tilmaamay “kuwo aan wadaniyiin ahayn”.
Ka dib markii la daabacay qoraalka caddeynta ah, Afhayeenka Aqalka Cad, Stephanie Grisham, wuxuu yidhi Dimuquraadiyiinta “waxay gebi ahaanba ku fashilmeen soo bandhigidda cadeyn muujineysa in khalad la sameeyay” iyo in warbixinta “ay muujineyso jahwareerka iyaga haysta oo keli ah”.
By Wariye July 15, 2020
(SLT-Hargeysa)-Wasaaradda Ganacsiga Somaliland ayaa soo saartay amar cusub oo lagu mamnuucayo Tubaako halis ah ku ah...
(SLT-Hargeysa)-Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Jamhuuriyadda Somaliland Md Axmed Maxamed Diiriye (Toorno), ayaa kulan la...
Weriye Maxbuus Ahaa Oo COVID-19 Ugu Dhintay Dalka Masar
(SLT-Qaahira)-Suxufigii caanka ahaa ee reer Masar Mohamed Monir ayaa u dhintay xanuunka Covid-19, sida gabadhiisa ay...
(SLT-Washington)-Xukumadda madaxweyne Donald Trump ayaa ka noqotay qorshaheedi ahaa iney ardayda ajaanibta ee casharrada jaamacadaha ku...
By WariyeJuly 15, 2020